Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Ndira 13, 2021
Vanhu makumi maviri nevatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete.
Apo nyika yapinda musvondo repiri reNational Lockdown Level 4, vanhu vakawanda havasi kutevedzera zvakatarwa nehurumende senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19 zvisineyi kuti huwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi huri kuramba huchikwira.
Muzvare Henrietta Rushwaya, avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo, vanopihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
Mutori wenhau, Hopewell Chin’ono, pamwe nemumiriri weZengeza West mudare re National Assembly, uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance, VaJob Sikhala, vasvitsa chikumbiro chekuti vapihwewo mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tine gweta riri kutsanangura zvinoreva mutemo wakadzikwa neBritain uyo uri kurambidza vanobva kuZimbabwe nenyika dzemuSADC kushanyira nyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19.
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.